> Resource > Lugood > Sida loo beddel EPUB Cover via Lugood
Waxaa sugan in, haddii aad iibsato EPUB e-buugaagta via Lugood Store ama iBooks Store, waxaad heli kartaa buugaagta EPUB 100% Daboolida. Si kastaba ha ahaatee, wax uu noqon karaa arrin oo kala duwan, haddii aad ka mid ah goobaha la wadaago e-buugga soo bixi buugaagta EPUB lacag la'aan ah ama aad buugaagta EPUB keligaa. Sida caadiga ah, buugaagta EPUB, kuwaas oo aan haysan daboolida. Marka aad soo bandhigaan on e-akhristayaasha iBooks ama Stanza, waxaad iyaga ma kala saari karaa mid ka mid kale. Haddii ay sidaa tahay, waxaad u baahan kartaa in aad ku darto daboolida gaar ah oo buug kasta EPUB siday u kala horreeyaan. Dhab ahaantii, waa quruxsan fudud si ay u gaarto goolkii. Halkan waa jidka noo jooga, ku dar cover EPUB via Lugood.
Marka hore, waa in aad hesho qaar ka mid ah daboolida buug baahisey, labada download internetka ama aad by. Save daboolida buug, kuwaas oo ku wadid aad u adag.
Labaad, abuurtaan Lugood iyo dajiyaan buugaagta EPUB, kuwaas oo aan jirin daboolida in Lugood Library. Tag "File> dar File inay Library" iyo Dul buugaagta EPUB oo guji "Open". Ama waxaad si toos ah jiidi karaan jeedi buugaagta EPUB in Lugood Library.
Saddexaad, qaybta "Kitaabka", waxaad arki karin buugaag kuwani waa la'aanta oo dhan ee daboolida, oo keliya magaca buugga ku rakiban yihiin. Xaq-riix mid ka mid ah iyo dooro "Get Info" in la furo sanduuq wadahadal la xiriira EPUB ah. Riix ah "farshaxanka" tab in la furo sanduuqa wadahadal farshaxanka ku daray oo guji "Add" button on interface in ay ku darto daboolka EPUB diyaar.
Waxaad u sameeyey! Waa qabow, sax? Tani waa habka ugu fudud ee aan loo isticmaalaa in lagu daro daboolida iminka buugaagta EPUB aan. Waxaa kaloo jirta, marka aad rabto in aad bedeli daboolka jir ah mid cusub. Waxa ay noqon kartaa mid macna haddii aad wakhti isla qaadataan in astaysto kuu gaar ah daboolida e-buugga. Haddii aad rabto in la dhiso EPUB kuu gaar ah eBook ka Word, qoraal, sawir iyo si ka sii Daboolida eBook qurux badan, isku day Wondershare MePub , xirfadle EPUB dhise si ay u abuuraan eBooks EPUB.